Wadahadalo dhex maray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Shiinaha – Madal Furan
Hoy > Warka > Wadahadalo dhex maray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Shiinaha
Wadahadalo dhex maray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Shiinaha
Beiging (Madal Furan) Madaxweynaha dowaldda Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Madaxweynaha dowladda Shiinaha Xi Jinping ayaa waxaa ay yeesheen wada hadal ay kaga hadleen xiriirka Labada dowladood ee mudada dheer so jiray.
Madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu ka qayb gelayaa shirka Madasha Iskaashiga Waddamada, waxaana kulankaani ahaa mid ka hormaray shirkaas oo ay yeesheen Labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Shiinaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping ku bogaadiyey dib u habaynta uu ku sameeyey siyaasadaha dalkiisa si waddanka Shiinaha loo gaarsiiyo horumar ballaaran.
Sidoo kale Madaxweyne Xi Jinping ayaa ku ammaanay Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa horumarka ay ka gaareen dhinacyada siyaasadda, dibu dhiska dalka iyo dhaqaalaha.
Labada Madaxweyne ayaa waxay isla lafa gureen qodobo la xiriira iskaashiga labada dhinac, ganacsiga iyo maalgashiga, hiigsiyada cusub ee iskaashiga dhaqaale, iyo dadaallada lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Soomaaliya.
Sidoo kale Labada hoggaamiye waxay isla falanqeeyeen ka qaybgalka Soomaaliya ee Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika (FOCAC) iyo muhiimadda uu leeyahay hindisaha lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaale ee loo yaqaan “Belt and Road Initiative”, kaas oo fududeynaya isku xirnaanta dalalka qaybta ka ah, korna u qaadaya horumarkooda dhaqaale.
Madaxweyne Farmaajo ayaa qiray taageerada laxaadka leh ee Shiinaha, isagoo ku dhiirrigeliyey inay sii xoojiyaan taageeradooda dhinaca horumarka iyo in la dardargeliyo xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Soomaaliya.
Labada Madaxweyne waxay isla meel dhigeen in la sii kobciyo heshiisyada ka dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha, iyo in la abuuro iskaashiyo hor leh oo ku aaddan horumarka iyo dhaqaalaha.
Dhegeyso Waraysi :- Dr. Gaas sidee u arkaa martiqaadka Madaxweyne Farmaajo
Shirkadda Apple oo markii ugu horeysay Xarun cusub ka furatay Magaaladda Muqdisho